"Tsamaks" ngoba izinja: izinkomba ukusetshenziswa, imiyalelo, ukubuyekezwa
"Tsamaks" ngoba izinja - ukulungiswa isenzo ububanzi okusho engenakuqhathaniswa. Zokunakekela izilwane, isetshenziswa njenge-ejenti amanxeba, isinqandakuvunda kanye sorbent. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa ejenti kuyafaneleka futhi izifo yaleli pheshana emathunjini.
Yikuphi izifo ukusebenzisa
"Tsamaks" ngoba izinja isetshenziselwa:
Ukulondoloza imisebenzi okuvikela umzimba.
Thuthukisa isimiso sokugaya ukudla bungene.
Khipha ifomu zomuthi
Kukhona izinhlobo eziningana izimali akhishwe ngoba zangaphandle, futhi ukusebenza kwangaphakathi.
1. "Tsamaks" ngoba izinja, ekhiqizwa ngenhloso a okufakiwe okuphakelayo, kuyinto amafomu eziningana ukukhululwa:
2. Isicelo sangaphandle:
Isakhiwo izimali zibandakanya:
Zeolite - sorbent. Ingqikithi ukuthi libukeka isiponji, iqukethe e ikhule ezimbotsheni yayo ebaluleke kakhulu izakhi mkhondo edingekayo isilwane. Imiphumela emzimbeni futhi ezinobuthi, futhi izinsimbi ezisindayo, nitrate, mercury phenols, futhi radionuklienty.
Izinto equkethe sulphur, isebenze ukukhiqizwa acid acid, kulawula umzimba, ukuhlinzeka operation efanele wonke umzimba.
Powder "Tsamaks" ngoba izinja yakhiwa, ngaphezu izingxenye ngenhla, futhi izinto isinqandakuvunda anomthelela ukuthuthukisa izinqubo zokutakula kwezicubu, kuncishiswe ingozi ukusakazwa ubovu inflammations futhi ahlinzeke umsebenzi anti-microbial zomuthi.
"Tsamaks" njengoba okufakiwe okuphakelayo esetshenziselwa:
Ukuphazamiseka umsebenzi kwezinso nesibindi.
Ukwephulwa amaminerali umzimba.
izifo emathunjini ipheshana, mhlawumbe-non-esithathelanayo (uhudo, enteritis, njll).
Ukuvimbela uqweqwe ezivamile, demodectic mange, Trichophyton.
Ukuze ukubuyisela amasosha omzimba inja.
ukuvuvukala we yangaphandle canal sokuzwa.
Namin imvuthu ngezidladla.
Ngaphezu kwalokho, lo powder ngokuvamile esetshenziselwa ukususa isikhumba yizindawo creases, iphunga neutralization futhi omiswe KULETHA.
Izimo izidakamizwa side effects
Izimo zomuthi aye atholakala. Kuyefana nasendleleni side imiphumela.
"Tsamaks" ngoba izinja: Umhlahlandlela
Uma usebenzisa "Tsamaksa" njengoba Izithako zokudla Isikali kunqunywa kuncike esisindo sesilwane:
Ekwelapheni - ngesilinganiso 0.5 amagremu ekulungisweni ngalinye 1 kg inja isisindo (ukusetshenziswa ngaphakathi 2 amaviki).
Ngokuba nokuvimbela - ekubalweni 0.3 amagremu ekulungisweni ngalinye 1 kg isisindo (isilinganiso esisodwa ezinyangeni ezintathu).
Kusho kufanele axutshwa nokudla, ukunikeza 1 ngosuku.
Ukuqinisekisa ukusetshenziswa ngendlela efanele powder kuyadingeka ukuze agcine eziningi imithetho elula:
Endaweni ethintekile isikhumba ukuba pre-uswidi trohprotsentnym ikhambi i-hydrogen peroxide.
Esivulekile afafaze ebusweni ezilimele, isicelo ngebhandeshi alengayo ukulungiswa.
It Kunconywa ukwelashwa kanye ngosuku wenza kutholakale ukuphulukiswa okusheshayo amanxeba. Inkambo yokwelashwa - kusuka izinsuku ezintathu kuya kweziyisikhombisa.
Izibuyekezo abanikazi inja
Kuyi-Internet, izimpendulo eziningi mayelana "ukulungiselela Tsamaks ', iningi labantu okuyinto akhayo. Ikakhulukazi abanikazi bezinja uthi umphumela oqabulayo powder, ngesikhathi esifushane, amandla okuphilisa ngisho ukulimala kabi kakhulu. Umuthi ngokuphelele zidla igazi, kuyilapho iphele ukuphuma isikhumba ezivimbela ukukhula kwamagciwane ayingozi. Ngenxa yalezi izakhiwo, "Tsamaks" kunciphisa ingozi suppuration, esheshisa inqubo sokuphulukiswa, deodorizes futhi kunomphumela nkinga.
Kanjani ukufundisa puppy yakho ethoyilethi emgwaqweni: ukufundisa ibhizinisi lakho ingane ezibalulekile
Isidingo imigomo izinja
Okuphakelayo "Hamba" ngoba izinja: izinzuzo kanye nokubuyekeza amakhasimende
Izinhlobo izinhlanzi Aquarium.
Kuhle Ukhastadi. Recipe ukhilimu éclairs
Yini ubhake ngaphandle amaqanda? zokupheka Good imifino
Umdlavuza wegazi: kuyini futhi kukhona noma yisiphi amathuba ukuze sithole insindiso?
Kuyinto Amazing: abantu endala kakhulu emhlabeni abaqhubeka ukusebenza
Ngempumelelo ukukhangisa uhlobo - omfushane Ukukhangisa
Izidakamizwa "Theraflu" umugqa: ukwakheka
I enkulu cinema isikrini eMoscow: izinzuzo IMAX-namaphrojektha
Amavithamini 'Immunomishki' ukubuyekeza nezincomo ukusetshenziswa
"SaseNevsky Prospect". Isifingqo inoveli